merolagani - खुद बीमा शुल्कमा शीर्ष स्थानमा रहेको नेपाल लाइफकाे नाफा घट्याे,नेप्सेमा सूचीकृत कुन कम्पनी कस्तो?
खुद बीमा शुल्कमा शीर्ष स्थानमा रहेको नेपाल लाइफकाे नाफा घट्याे,नेप्सेमा सूचीकृत कुन कम्पनी कस्तो?
Nov 22, 2021 05:51 PM Merolagani
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा सूचीकृत जीवन बीमा कम्पनीहरु मध्ये नेपाल लाइफले खुद नाफा बाहेक अधिकाँश सूचकमा आफ्नो अग्रता कायमै राख्न सफल भएको छ । जीवन बीमा क्षेत्रमा क्रियाशील र शेयर बजारमा सूचीकृत मध्ये नेपाल लाइफ धेरै अगाडि छ ।
तर कम्पनीले शेयर नोक्सानी वापत १८ करोड ८ लाख रुपैयाँ छुट्याउँदा खुद नाफा भने उल्लेख्य घटेको छ । खुद नाफा आर्जन गर्ने जीवन बीमा कम्पनीहरुको सूचीमा नेपाल लाइफ पुच्छारमा रहेको छ ।
चुक्ता पूँजी सबैभन्दा धेरै ७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको नेपाल लाइफको बीमा व्यवसायको मुख्य श्रोत खुद बीमाशुल्क आर्जन र जीवन बीमा कोषमा मात्रै अग्रता राख्न सकेको छ । जगेडा कोषमा नेपाल लाइफलाई युनियन लाइफले उछिन्दा खुद नाफामा भने प्राइम लाइफले लिड गरेको छ ।
अधिकांश सूचकमा नेपाल लाइफले लिड गर्दा नेप्सेमा सूचीकृत जीवन बीमा कम्पनीहरु रिलायन्स
लाइफ, प्रभु लाइफ र गुराँस लाइफ कमजोर देखिएका छन् । पुराना कम्पनीहरुको तुलनामा रिलायन्स र प्रभु लाइफ भने नयाँ भएकोले कमजोर देखिएको हो ।
पुराना कम्पनीहरूमा भने गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कमजोर देखिएको छ । यस कम्पनीको चुक्ता पूँजी पनि सबैभन्दा कम १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
नेपाल लाइफ पछि नेशनल लाइफको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ छ । यस्तै, प्राइम, सुर्या, एलआइसी नेपाल, ज्योति लाइफ, युनियन लाइफ, रिलायन्स लाइफ, एशियन लाइफ र प्रभु लाइफले न्यूनतम २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पूँजी पुर्याएका छन्
खुद बीमाशुल्क २७ अर्ब माथि, नेपाल लाइफको मात्रै करिब १० अर्ब योगदान
नेप्सेमा सूचीकृत ११ जीवन बीमा कम्पनीहरुले यस अवधिमा कूल २७ अर्ब ६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । त्यसमा नेपाल लाइफको मात्रै ९ अर्ब ७४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तै, एलआइसी नेपालले ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ, नेशनल लाइफले ३ अर्ब ४४ करोड, युनियन लाइफले १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, एशियन लाइफले १ अर्ब ५७ करोड, प्राइम लाइफले १ अर्ब १७ करोड, सूर्या लाइफले १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । बाँकी कुनै पनि बीमा कम्पनीहरुको खुद बीमाशुल्क भने अर्ब नाघेको छैन् ।
सबै भन्दा कम खुद बीमाशुल्क आर्जन गर्नेमा प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा प्रभु लाइफले ५५ करोड ६३ रुपैयाँ मात्रै खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ ।
खुद नाफा ७० करोड पुग्यो, प्राइम लाइफको मात्रै साढे १२ करोड
नेप्सेमा सूचीकृत ११ जीवन बीमा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ७० करोड ६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै खुद नाफा कमाउनेमा प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । प्राइम लाइफले यस अवधिमा १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको हो ।
त्यसपछि, सूर्या लाइफले ११ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यस्तै, एशियन लाइफले ९ करोड ६२ लाख, ज्योति लाइफले ९ करोड २२ लाख र नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले ८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् ।
जीवन बीमा कोष नेपाल लाइफ र जगेडा कोषमा युनियन लाइफ मजबुत
जीवन बीमा कोषमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र जगेडा कोषमा युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स मजबुत देखिएको छ । जीवन बीमा कोषमा नेपाल लाइफको सबै भन्दा धेरै १ खर्ब १८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र जगेडा कोषमा युनियन लाइफको सबैभन्दा धेरै १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ ।
यस्तै, नेपाल लाइफ पछि जीवन बीमा कोषमा एलआईसी नेपालको ८३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सञ्चित छ । जगेडा कोषमा भने युनियन लाइफ पछि एशियन लाइफको ९८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ ।
जीवन बीमा कोषमा सबै भन्दा कम प्रभु लाइफको २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ भने जगेडा कोषमा रिलायन्स लाइफको २६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्रै सञ्चित रहेको छ ।
प्रतिशेयर आम्दानीमा प्राइम लाइफ अगाडि
प्रतिशेयर आम्दानीमा प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स अघि देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा प्राइम लाइफ इन्स्योन्स प्रतिशेयर आम्दानी सबै भन्दा धेरै २० रुपैयाँ २८ पैसा रहेको छ ।
यस्तै, सूर्या लाइफको २० रुपैयाँ ४ पैसा, एशियन लाइफको १९ रुपैयाँ १२ पैसा र ज्योति लाइफको १६ रुपैयाँ ७८ पैसा रहेको छ ।
सबै भन्दा कम प्रतिशेयर आम्दानी भने नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ३९ पैसा मात्रै रहेको छ ।